ကုလားစုတ်နဲ့ ချင်းစုတ် – မြန်မာတွေရဲ့ “ethnic labeling or Racial Profiling and Ethnic Slurs” အကျင့် | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Bill Maher Isn’t the Only One Who Misunderstands Religion
May be…Myanmar Election would be held or cancelled roughly on 28.9.2015 during the next Lunar eclipse »
ကုလားစုတ်နဲ့ ချင်းစုတ် – မြန်မာတွေရဲ့ “ethnic labeling or Racial Profiling and Ethnic Slurs” အကျင့်
ကုလားစုတ်နဲ့ ချင်းစုတ် – မြန်မာတွေရဲ့ “ethnic labeling” အကျင့်
အောက်တိုဘာ ၈ ၊ ၂၀၁၄ M-Media သူရမင်းမင်း ရေးသည်။
တရက် တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဆိုသလို လူမျိုးအမည်တပ်တဲ့ ကိစ္စ သွား သတိထားမိပါတယ်။ အရင်က မွတ်စလင်တွေကိုသာ ကုလားစုတ်၊ ခွေးကုလား၊ အထက်အောက် ဆဲပြီး ခေါ်တာ ကြားဖူးပေမယ့် ဒီနေ့ တော့ မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ (Myanmar Peace Center) က ဒေါက်တာ ဆလိုင်း အန်ဒရူး ငွန်ကျုံးလျန်ကိုေ-ာက်ချင်းစုတ်၊ ခွေးချင်း၊ တမျိုးလုံး သိက္ခာကျအောင် လုပ်နေတဲ့ ချင်း ဆိုပြီး ဝေဖန် ရေးသားကြတာတာ ထားမိပါတယ်။
ဒေါက်တာငွန်ကျုံးလျန်ကို မှန်တယ် မှားတယ်မပြောလိုပါဘူး။ ဘယ်ဖက်ကိုမှ လိုက်ပြီးတော့ လည်းမပြောလိုပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေက လူတစ်ယောက်ရဲ့ လုပ်ရပ်၊ အထူးသဖြင့် လူနည်းစုထဲက တယောက်ယောက်ရဲ့လုပ်ရပ်ကို ပြောတဲ့နေရာမှာ သူ့ လူမျိုးကိုပါ ဆွဲထည့်ပြီး ပြောတတ် တာရယ်၊ ပြောတာတောင် ရိုးရိုးပြောတာ မဟုတ်ဘဲ လူမျိုးနဲ့မဖွယ်မရာတွေကို တွဲပြီး၊ ခိုင်းနှိုင်းပြီး သိမ်းကျုံးပြီး စော်ကားတတ်တဲ့ အကျင့်ဆိုးကို မီးမောင်းထိုးပြချင်တာပါ။
MPC မှာ ဥပဒေ ပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ဒေါက်တာ ငွန်ကျုံးလျန်ဟာ ခု နောက်ပိုင်း သူ့ ရဲ့ နိုင်ငံရေးရပ်တည်ချက်ကြောင့်၊ အထူးသဖြင့် အစိုးရဘက် ရပ်တည်တယ်လို့ယူဆခံရချက်တွေကြောင့် ဝေဖန်ခံရပါတယ်။ တလောက သတင်းမီဒီယာတခုနဲ့အင်တာဗျူး မှာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံကို စမ်းသုံးကြည့်ဖို့ ၊ နိုင်ငံရေး ပါတီတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီ ဖွဲ့ စည်းပုံကို ပြောင်း လဲဖို့ပြည်သူတွေကို ပြန်ပေးဆွဲ Hijack မလုပ်ဖို့ ပြောပါတယ်။ NLD ကို တိုက်ရိုက် ဝေဖန်တယ်လို့ပြောလို့ ရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ NLD ကို ဝေဖန်တဲ့ ဗမာတွေကိုေ-ာက်ဗမာ၊ ခွေးဗမာ၊ ဗမာစုတ်ရယ်လို့လူမျိုးကို ထည့်ပြီးမဆဲပါဘူး။
သူပြောတာ ဝေဖန်ချင်တယ်ဆိုရင် သူ့ ကို လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ သာ ဝေဖန်သင့်ပါတယ်။ သူက ချင်းတိုင်းရင်းသားသာဖြစ်ပြီး ချင်းတွေကို ကိုယ်စားပြုပြောတာ မဟုတ်သလို၊ ချင်းတွေရဲ့ပေါ်လစီရပ်တည်ချက်ကို ပြောတာလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ချင်းအဖွဲ့ အစည်းတွေက သူတို ရပ်တည် ချက်ကို ပြောတယ် ဆိုရင်တောင် နိုင်ငံရေး အနေနဲ့ သာ ကိုင်တွယ်ရမှာဖြစ်ပြီး လူမျိုးရေးကိုဆွဲ ထည့်လို့ မရပါဘူး။
ဗမာတွေထဲမှာလည်း ဒေါ်စုနဲ့NLD ကို ဝေဖန်တဲ့လူတွေ၊ တိုက်ခိုက်တဲ့လူတွေ အများကြီးရှိပါ တယ်။ နိုင်ငံရေး အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲကနေ တရားဝင်ဝေဖန်သလို အွန်လိုင်းမှာ ဝေဖန်ရေးသား နေတာ တွေလည်းရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ NLD ကို ဝေဖန်တဲ့ ဗမာတွေကိုေ-ာက်ဗမာ၊ ခွေးဗမာ၊ ဗမာစုတ်ရယ်လို့လူမျိုးကို ထည့်ပြီးမဆဲပါဘူး။
NLD မပြောနဲ့၊ ဒီလောက်ဆိုးရွားပါတယ်ဆိုတဲ့ စစ်တပ်ဖက်ကလိုက်တဲ့ လူတွေကိုဆဲရင်တောင် ဗမာလူမျိုးကို ထည့်မပြောပါဘူး။
တလောကပဲ MPC က ဦအောင်နိုင်ဦးက ရန်သူမျိုးငါးပါးမကတော့ပဲ မီဒီယာတွေက နောက် ထပ် ရန်သူမျိုးတစ်ပါးဖြစ်တယ်လို့ ပြောတဲ့အကြောင်း မီဒီယာမှာ ဝေဖန်ခံ ရပါတယ်။ ဒီလိုပဲ သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ တွေ့ တဲ့နေ့ က ပြသနာလုပ်တဲ့ သတင်း သမားတွေကို ထောင်ထဲပို့ မယ်လို့MPC က ဒေါက်တာမင်းဇော်ဦးက ပြောပါတယ်။
သူတို့ ကိုတော့ ဗမာစုတ်၊ေ-ာက်ဗမာ၊ ဗမာတမျိုးလုံး သိက္ခာ ကျအောင်လုပ်နေတယ်လို့မဆဲကြပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ဒေါက်တာငွန်ကျုံးလျန်လို တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုတစ်ယောက်က ပြောတော့ ချင်းဆိုတာကို ဆွဲထည့်ပြီး မနှိုင်းသင့်တာတွေနဲ့နှိုင်းပြီးဆဲပါတော့တယ်။
ဗမာတွေ လုပ်ရင် လူမျိုးကို ထည့်မပြောဘဲ တခြားလူတွေလုပ်တော့ကျရင်မှ ဘာကြောင့် လူမျိုး ကိုထည့်ပြောရတာလဲ။ လူတယောက်ယောက်ရဲ့ လုပ်ရက်ကို အမိအရအသုံးချပြီး အဲ့ဒီလူ ရဲ့ လူမျိုးတခုလုံးကို သိက္ခာဆွဲချလိုက်ချင်တာလား။
မြန်မာပြည်မှာ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ တန်းတူရေးတို့ အတွက် ကြိုးစားနေချိန်မှာ အခုလို လူမျိုးကို ထည့်ပြီးပြောတာတွေဟာ ဗမာတွေကို တိုင်းရင်းသားတွေ ယုံကြည်လာရေး မှာ အဟန့် အတားဖြစ်စေနိုင်တယ်၊ ဗမာတွေဟာ တိုင်းရင်းသားတွေကို အရင်လို အထင်သေး မြဲ၊ ဂရုမစိုက်မြဲ၊ နှိမ်ချမြဲ ဆိုတာ ပိုပြီးပေါ်လွင်နေစေတယ်။ ဒီလို “ethnic labeling” အကျင့်တွေကို ပြင်ဖို့ လိုတာ ဆိုတာ မီးမောင်းထိုးပြလိုက်ရပါတယ်။
This entry was posted on October 10, 2014 at 11:42 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.